Indlela Yokulinganisa I-akhawunti Yakho Yokukhangisa ye-Amazon Martech Zone
Kukaningi kunezikhathi lapho sizibuza khona, njengabakhangisi, ukuthi isikhangiso sethu sisisebenzisa kanjani uma kuqhathaniswa nabanye abakhangisi embonini yethu noma kunqamula isiteshi esithile. Izinhlelo zeBenchmark zenzelwe lesi sizathu - kanti abakwaSellics bakhiphe umbiko wamahhala wokuma kwe-Akhawunti Yokukhangisa ye-Amazon ukuqhathanisa ukusebenza kwakho nabanye.
Ukukhangisa kwe-Amazon kunikeza izindlela zabakhangisi zokuthuthukisa ukubonakala kumakhasimende ukuthola, ukubhekabheka, nokuthenga imikhiqizo nemikhiqizo. Izikhangiso zedijithali ze-Amazon zingaba yinoma iyiphi inhlanganisela yombhalo, isithombe, noma ividiyo, futhi zizovela yonke indawo kusuka kumawebhusayithi kuye ekuxhumaneni nomphakathi nokusakazwa kokuqukethwe.
Ukukhangisa kwe-Amazon inikeza izinketho eziningi zokukhangisa, kufaka phakathi:
Imikhiqizo exhasiwe - izindleko zokuchofoza ngakunye (CPC) ezifaka uphawu lomkhiqizo wakho, isihloko esiyinhloko, nemikhiqizo eminingi. Lezi zikhangiso zivela emiphumeleni yokuthenga efanele futhi zisiza ukushayela ukutholakala komkhiqizo wakho phakathi kwamakhasimende athenga imikhiqizo efana neyakho.
Imikhiqizo Exhasiwe - izindleko zokuchofoza ngakunye (CPC) ezikhuthaza ukufakwa kuhlu komkhiqizo ngazinye ku-Amazon. Imikhiqizo exhasiwe isiza ukuthuthukisa ukubonakala kwemikhiqizo ngayinye ngezikhangiso ezivela kwimiphumela yosesho nasemakhasini emikhiqizo
Ukuboniswa okuxhasiwe - Isixazululo sokukhangisa sokubonisa ukuzisiza esikusiza ukuthi ukhulise ibhizinisi lakho nomkhiqizo wakho ku-Amazon ngokubandakanya abathengi kulo lonke uhambo lokuthenga, ukuvala nokuvala i-Amazon.
Amabhentshimakhi wesikhangiso se-Amazon
Ungathola imininingwane ebalulekile ngokubheka ukusebenza kwe-Amazon yokukhangisa kwakho nabanye embonini yakho. I- I-Sellics Benchmarker ihlaziya ukusebenza kwakho kumikhiqizo exhasiwe, ama-Sponsored Brands, naku-Sponsored Display futhi ikubonise ngqo lapho wenza khona kahle nalapho ungathuthukisa khona.
Amamethrikhi wokubika wokulinganisa abalulekile aqhathaniswa yilena:
Amafomethi ezikhangiso axhasiwe: Ngabe usebenzisa wonke amafomethi afanele i-Amazon okufanele inikele ngawo? Ngamunye unamasu namathuba akhe ahlukile. Hlaziya imikhiqizo exhasiwe, ama-Brands axhasiwe nokubonisa okuxhasiwe
Amaphuzu anemininingwane: Qonda ukuthi ungowaphezulu kwama-20% - noma phansi
Qhathanisa nezindleko zokukhangisa zokuthengisa (I-ACOS): Ayini amaphesenti wokuthengisa okuqondile okwenzile kusuka kumikhankaso yezikhangiso exhasiwe ngokuqhathanisa nomkhangisi ophakathi? Ngabe nawe uyakhathalela kakhulu? Qonda amandla wokwenza inzuzo esigabeni sakho
Beka uphawu lwezindleko zakho ngokuchofoza ngakunye (CP) C: Abanye bakhokha malini ngokuchofoza okufanayo? Funda ukuthi ungayithola kanjani ibhidi ephelele
Khulisa Isilinganiso Sakho Sokuchofoza (CTR): Ngabe amafomethi wakho wesikhangiso ayedlula imakethe? Uma kungenjalo, funda ukuthi ungawandisa kanjani amathuba wokuchofoza
Thuthukisa isilinganiso sokuguqulwa kwe-Amazon (I-CVR) Amakhasimende aziqedela ngokushesha kangakanani izenzo ezithile ngemuva kokuchofoza isikhangiso. Ngabe imikhiqizo yakho ithengwe kakhulu kuneminye? Funda ukuthi ushaye kanjani imakethe futhi uqinisekise abathengi
Idatha ye-Sellics Benchmarker isuselwa ocwaningweni lwangaphakathi lwe-Sellics ngesampula emele ngaphezulu kuka- $ 2.5b kumali ehlanganisiwe yonyaka ye-Amazon etholwe yimali yesikhangiso. Ucwaningo njengamanje lususelwa kwimininingwane ye-Q2 2020 futhi luzobuyekezwa njalo. Imakethe ngayinye, imboni, iqoqo lefomethi lifaka okungenani izinhlobo ezingama-20 ezihlukile. Izilinganiso yizibalo eziphakathi kwezobuchwepheshe ezenzelwe ukuphendula abathengisa izinto ngaphandle.
Beka uphawu lwe-Akhawunti Yakho Yokukhangisa ye-Amazon
I-Amazon Advertising Benchmark Report Demo
Ukuzikhulula: Ngingumuntu ohlangene we I-Sellics.
Tags: ukukhangisa kwe-amazonImikhiqizo Exhaswe Ngama-AmazonImikhiqizo exhaswe ama-Amazonabathengisi